Home Somali News Somaliland: Taliyaha Ciidanka Qaranka Oo Kormeeray Fadhiisimada Ciidanka Ee Sool
Taliyaha guud ee ciidamada qaranka Somaliland, Sarreeye Gaas Ismaaciil Maxamed Cismaan(Shaqalle), oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska guud ee ciidanka ayaa socdaal ku soo maray fadhiisimada Ciidanka qaranka ee aagga hore ee gobolka Sool.
Sareeye Gaas Shaqale, ayaa ciidamada qaranka kula dardaarmay feejignaan iyo inay laban laabaan heeganka ay ugu jiraan difaaca dalka, balse waxaanu soo hadal qaadin xiisada dagaal ee ka taagan bariga Laascaanood oo maamulka Puntland ciidamo keenay.
Taliyaha ayaa socdaalkiisa ku maray fadhiisimada ciidanka ee degaannada Xuddun,Gambadhe iyo Kala-baydh “Waxaan gobolkan Sool ku timid socdaal hawleed oo kuwii awal ba aan ku iman jiray ah, kaas oo ujeedadiisu tahay inaanu ciidanka qaranka cutubyadiisa kala duwan ku soo kormeero fadhiisimada, hawshaasi si fiican bay noogu dhacday, waanu soo bookhanay dhammaan fadhiisimada” ayuu yidhi Taliye Shaqalle oo saxaafadda kula hadlay Laascaanood .
Taliyaha ciidanka qaranka Somaliland waxa uu sheegay inay halkaasi ku soo arkeen dhul barwaaqaysan oo Illaahay nimceeyay,waxaanu dardaaran u jeediyay ciidanka qaranka “Dhammaan saldhigyada gobolka Sool waxaan ku hambalyaynayaa hawshaas ay qaranka u hayaan sida xilkasnimada leh ee ay hadh iyo habeen u gudanayaan, waxaanan u soo jeedinayaa inay ka sii kordhiyaan feejignaanta iyo adeegga ay umadda u hayaan ba” ayuu yidhi taliyuhu.
Xiisad Dagaal oo u dhexaysay Somaliland iyo Maleeshiyaadka Puntland
Maleeshiyaadka maamul goboleedka Puntland ayaa isa soo dhoobay meel aan masaafo badan u jirin deegaanka Tukaraq oo ilaa 52-km dhanka bari kaga beena magaalada Laascaanood, halkaasi oo ay ciidamada qaranka Somaliland degenyihiin, waxaanay Puntland abaabulaysaa weerar ay ku soo qaado ciidamada qaranka Somaliland.
Maleeshiyaadkan oo ah kuwo ururis ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay lagu soo dhoobayay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool iyadoo loo soo dhammaystiray sahayda kala duwan sida biyaha, shidaalka iyo gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegay in qorshahoodu yahay sidii ay u soo weerari lahaayeen ciidanka qaranka ee ku sugan gobalka Sool.
Hase yeeshee ciidanka qaranka oo helay xogo sirdoon ayaa la sheegay inay iyaguna galeen heegan buuxa oo ay kaga diyaar garoobeen weerar kasta oo kaga yimaada maleeshiyaadkaas.
Ismaaciil Maxamed Cismaan(Shaqalle)
UK: Cardiff Council’s Decision to Recognise Republic of Somaliland Comes Under Fire from Members of City’s Somali Community
Somaliland: “Kalsooni Badan Baan Ku Qabaa Inaan Wadaantayda Ka Buuxsan Doono Oon Rag Badan Kaga Badsan Doono” Hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan
Wargane Tv: Maayarka Caasimada Hargeysa Oo Gaadhi Ku Wareejiyay Gudoomiyaha Degmada Dacarta